महिला मिश्र | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! महिला मिश्र | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
10 रील र9payline स्लट, महिला मिश्र जहाँ सबैभन्दा शक्तिशाली महिला क्लियोपेट्रा शक्ति छ तपाईं मिश्र पुरातन भूमि भ्रमण गर्नेछ. यो फोन स्लट मिसिन बिल गति स्पिन सक्रिय रीलों विशेषताहरु जो एकदम एक अपरंपरागत खेल छ.
लेडी मिश्र को विकासकर्ता बारेमा
यो फोन स्लट मिसिन बिल वैज्ञानिक खेल द्वारा संचालित छ. कम्पनी को नियमन लटरी र खेल उद्योग को क्षेत्र मा अग्रणी छ. तिनीहरूलाई विकास खेल सामग्री धनी छन् र रोचक विषय र सुविधाहरू आउन.
यो फोन स्लट मिसिन बिल आउँछ 10 रील र केवल9paylines. पहिलो तीन रील गति स्पिन सक्रिय रीलों भनिन्छ र यी जो मा खेल खेलिन्छ मात्र रील छन्. तपाईं एक विजेता स्पिन हुँदा, त्यसपछि यी रील सही तिर राख्न उत्प्रेरित. नगरेसम्म विजेता spins प्राप्त रील को रील को अन्त सम्म सार्न सक्नुहुन्छ. यी रील संग, तपाईं गुणक जीत 5x सम्म प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ. तपाईं यस को रील स्पिन गर्न सक्नुहुन्छ फोन स्लट मिसिन बिल प्रत्येक spin.The दृश्य लागि £ 175 को 35p देखि पिरामिड एक सेट सूर्य को चमक मा basking संग सेट गरिएको छ. सुन्दर क्लियोपेट्रा यहाँ नेतृत्व वर्ण छ. उनको अलग्गै, को रील मा तिर्ने प्रतीक हाइरोग्लिफ्स समावेश, पशु देवताहरूको, र नियमित जंगली र स्क्याटर.
यो स्लट को अन्य सुविधाहरू समावेश:
Pays विस्तार- यदि तपाईं एक3प्राप्त×3 ब्लक प्रतिमा वा दुई-तीन मिश्रित प्रतीक चिन्ह को एउटै आकार ब्लक त तपाईं यो लाभ प्रदान गर्दै. तपाईं त दुई-तीन उच्च मूल्य प्रतीक को एक ब्लक प्राप्त गर्न सक्षम छन् भने ब्लक प्रतीक तपाईं 350x आफ्नो लाइन wager प्रदान गर्दै. मध्यम मूल्य प्रतीक तपाईं आफ्नो लाइन wager 200x प्रदान गर्नेछ. ब्लक प्रतीक गठन तल्लो मूल्य प्रतीक तपाईं प्रदान गर्नेछ 50X आफ्नो लाइन wager.
रील 10 गुणक पुरस्कार- को रील 10 तपाईं अवार्ड सक्छन् 350 गर्न पटक 1,000 पटक अंधाधुंध गुणक. को रील को बीचमा 10, एक गुणक देखिने छ र तिमी एक सफल स्पिन छ भने तपाईं नै प्रदान गर्दै.
निःशुल्क खेल- 3,4र5यो सुविधा ट्रिगरिङ स्क्याटर प्रतीक तपाईं प्राप्त हुनेछ 8 मुक्त spins, 12 10x गुणक साथ निःशुल्क spins, र 16 25x गुणक साथ क्रमशः निःशुल्क spins.
यो फोन स्लट मिसिन बिल एक नवीन सेटअप गर्दछ तर अझै पनि प्ले गर्न एक एकदम सरल खेल रहिरहन्छ.